Ny Hotely mahagaga indrindra indrindra eran-tany
Vita tsotra ny hotely: tavoahangy misy tavoahangy kely, totozy maromaro vita amin'ny taratasy, angamba misy menaka eo amin'ny kiraronao amin'ny alina. Saingy mihamitombo hatrany ny fananana mandeha any ambony sy any ivelany mba hahatonga ny vahiny hahatsiaro tena ao an-trano-eritrereto ny fampiasana cocktails mihozongozona ao amin'ny efitranony, fifaneraseran'ny tetiarana izay hanangona ny razanao, ary na ny boban-trano aza (eny, mora adino izy ireo!). Nanara-maso ny zavatra vitsivitsy amin'ireo fitaovana mamoron-kira indrindra eto amin'izao tontolo izao izahay.
Alarobia Aurora ao amin'ny Arctic Snow Hotel any Rovaniemi, Finlandy
Ny fijerin'ny Northern Lights dia sombin-tsarin'ny lisitra ho an'ny ankamaroan'ny mpitsidika ao amin'ny arctic, saingy ny fahitana ilay sehatra dia mbola tsy azo antoka-na dia any avaratr'i Lapland aza. Nandritra ny ririnina, ny hotely Arctic Snow ao Rovaniemi dia nandoko ny sangisangy fitaratra nosoratany niaraka tamin'ny fanairana iray izay mivoaka avy hatrany rehefa maneho ny jiro-na inona na inona andro na alina. Tsara kokoa? Ny tahan'ny efamira ho azy dia misy ny serivisy. Ny zavatra rehetra tokony hataonao dia mifoha.
Ny fifehezana ao The Darcy any Washington, DC
Washington, DC ny trano fandraisam-bahiny Darcy dia manome fanamafisam-peo maro an-tsarimihetsika - mieritreritra mpihinana cocktail, tsenam-pambolena pop-up, ary fisakafoanana amin'ny alina - fa angamba ny fahaizany manokana dia Ny Programme Haberdashery. Ny mpiara-miasa amin'ny hotely Read Wall, mpanamboatra fitaratra eo an-toerana izay manome lamosina, ravina fako, paosin-doko ary akanjo hafa raha toa ka mandao ny fitaovanao any an-trano ianao-na mahazo fanasana an-tsokosoko ho an'ny mpandrindra ny kongresy. Azo alaina ny hofaina na ny fividianana.
Fenway Dirt ao amin'ny Fenway Park Suite any Boston Commonwealth
Sangisangy baolina kitra: samborinao ny alina ao amin'ny Fenway Park Suite Hotel Commonwealth. Ny efitrano malalaka, izay mirefy 507 metatra avy ao amin'ny valan-javaboary, dia navela niaraka tamin'ny fitaovana Red Sox, anisan'izany ny seza baolina tany am-piandohana teo amin'ny lakozia, baolina baseball, maromaro avy amin'ny baolina Maitso Green Monster, ary karatra baseball vintage. Ilay kicker? Ny salan-dakan'ny efitra dia misy kitapom-boto tena izy avy amin'ny Fenway Park - aza avela handavaka ao anaty valizy izany.
Genealogy Butler ao amin'ny The Shelbourne Hotel any Dublin
Ny fikarohana ny razambe dia fotoana mahafinaritra ho an'ireo mpitsidika any Irlandy, ary ny Hotel Shelbourne any Dublin dia mahatonga azy ireo ho mora kokoa ny mamantatra tantaram-pianakaviana. Ny hotely hotely dia afaka mangataka ny fanampian'ny Genealogy Butler hotely, mpikamban'ny Genéalogie manam-pahaizana izay nanampy ireo vahiny hianatra ny lovany nandritra ireo enin-taona farany. Ny zavatra rehetra tokony hataonao dia ny fangatahana ny serivisy rehefa mivoaka ny birao, ary mameno ny fampahalalana mialoha mba hanampiana ny tetiarana hiditra ao amin'ilay raharaha. Indray mandeha any amin'ny renin-dry zareo dia hipetraka amin'ny ora iray ora miaraka amin'ny mpitrandraka ianao, izay hanombantombana ny hazo misy anao - ary hanampiana ny fandehanana hanao drafitra any amin'ny fianakavianao.
Fiantohana fiantohana any Westin Copley Place any Boston
joe daniel vidiny / Getty Images
Ny Boston dia iray amin'ireo marathons malaza indrindra manerantany tsirairay isaky ny lohataona, noho izany dia tsy tokony ho gaga ny mpitsidika ao The Westin Copley Place afaka mandefa ny fanampian'ny "fiara fitaterana" mba hitarihana azy ireo amin'ny tanàna amin'ny fampiofanana. Ny alakamisy Talata sy Alakamisy maraina amin'ny 6:30 maraina (avril - desambra, ny fahazoana mamela) dia iray amin'ireo mpitarika fito amin'ny hotely no hitarika vondrona iray amin'ny lalana telo na dimy kilaometatra. Tsy vorona voalohany? Alaivo ny iray amin'ireo sarintany mitazona ny hotely ary alao ny anao; ireo lalana voatsinjara dia mandeha amin'ny Reniranon'i Charles, ny Museum of Science, ary ny Cambridge (miankina amin'ny halavirana).
BarkBox ao amin'ny Hotely Graduate any Tempe, Arizona
Pooches mahazo ny fitsaboana ataon'ny mpanjaka ao amin'ny hotely Graduate any Tempe. Ny alika tsirairay izay mijanona ao amin'ny trano fanatanjahan-tena dia mahazo ny BarkBox maimaim-poana-izay manolotra fitambarana kilalao vaovao sy fitsaboana ho an'ny olon-dehibe isam-bolana-ary misy bodofotsy alikakely sy koveta misy rano ampiasaina mandritra ny fijanonana. Raha misoratra anarana amin'ny serivisy ianao mandritra ny fotoana fijanonanao, dia hahazo volana maimaim-poana any an-trano ianao (tsy lazaina intsony fa feno fankafizana ny alika).
Tranom-basy ao amin'ny Hotel Epicurean any Tampa, Florida
Ny famakivakiana ny siramamy dia mety iray amin'ireo fihetseham-po ara-pihetseham-po lalina eo amin'ny planeta-ary ao amin'ny Hotel Epicurean ao Tampa, io fitsaboana io dia isaky ny maraina. Ny trano fandraisam-bahiny dia afaka manofa milina fitsaboana avy amin'ny minibar, ary mifidy avy amin'ny feo samihafa 10 samihafa mba hampidinihina azy ireo na hamoha azy ireo amin'ny maraina mifono fisainana onjam-peo Hawaiiana, mipoaka afo, ary eny, sizzling baolina. Tsy afaka miaina ivelan'ny sifotra? Raiso ny iray amin'ny milina miaraka aminao mandritra ny $ 60.
(Araka ny mahazatra ao amin'ny indostrian'ny fizahantany dia nanome saram-peo sasantsasany ho an'ny fanavaozana ny mpanoratra. Na dia tsy nisy fiantraikany tamin'ity lahatsoratra ity aza ny tranonkala, dia mino ny filazana feno momba ny fifandonana rehetra.)
Fomba ahoana no hanalavirana ny fampisehoana an-tariby?
Ny 8 tsara indrindra ao Los Angeles Hotels 2018
Toy izao ny fomba namonoana ny sombin-drongony
The 9 Best Hotels in Ho Chi Minh City of 2018
The 10 Best Hotels Eco-Friendly Hotels 2018
Fomba fanao ankapobeny ho an'ny ankizy any Atlanta
Mila Visa Hong-Kong ve Aho?
SoberRide Taxi Service any Washington, DC
Oviana no fotoana tsara indrindra hitsidihana an'i Ejipta?
Tanàna 10 misy Wi-Fi maimaim-poana any amin'ny toerana rehetra
Ny 5 andro fitsangantsanganana tsara indrindra any Boston
TSA Fepetra takiana sy adiresy ho an'ny Airline Travel
Fikarohana trano sy toeram-pitsaboana tany New Orleans
Roma, lalana mahatsikaiky
Ireo trano tsara indrindra any amin'ny faritanin'i Granada, Espaina
Paris Gay Pride ao amin'ny 2017: Detoronomy Full Event
Aiza ny fivarotana Walmart any Hawaii?
Mandeha any amin'ny Brooklyn Bridge ao NYC
Mijanona tsy manan-kialofana manodidina ireo boka